विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्ड ग,ल,त ! ‘कोठाभित्र १० मिटरभन्दा टाढासम्म फै,लि,न सक्छ कोरोना भाइरस’ – Jagaran Nepal
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्ड ग,ल,त ! ‘कोठाभित्र १० मिटरभन्दा टाढासम्म फै,लि,न सक्छ कोरोना भाइरस’
काठमाडौं । बन्द कोठामा कोरोनाको भाइरस निकै टाढा सम्म फै,ल,न सक्ने बैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा एक मिटरको दुरी कायम राख्न दिएको सु,झा,व पनि ग,ल,त, सा,वि,त भएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोना भाइरस बोकेका सूक्ष्म थोपा ब,न्द कोठामा १० मिटरभन्दा लामो दूरीसम्म फै,लि,न सक्छन् । जसका कारण अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्डले कोरोनावाट बच्न नसकिने देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अब आफ्नो मापदण्डमा परिमार्जन गर्नुपर्ने चे,ता,व,नी वैज्ञा,निकहरुको छ ।
विश्वका ३२ मुलुकका २३९ वैज्ञानिकहरुले डब्ल्यूएचओलाई पत्र लेख्दै कोरोना भाइरसवाट अवधारण परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् उनीहरुले हावावाट पनि कोरोना फै,ल,न सक्ने बताएका हुन् ।, वैज्ञानिकहरु का अनुसार बन्द कोठामा पाँच माइक्रोमिटरभन्दा साना ड्रपलेटहरु १० मिटरभन्दा लामो दुरीसम्म फै,लि,न सक्छन् । अहिलेसम्म डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कम्तीमा एक मिटरको भौतिक दुरी कायम राख्न दिशानिर्देश जारी गर्दै आएको छ ।
कोरोना विश्वव्यापी भएसंगै यसका विभिन्न पक्षको अनुसन्धान जारी छ । वैज्ञानिकहरुले कोरोनाको स्रोत, यसवाट बच्नका लागि खोप लगायतमा पनि अनुसन्धान जारी राखेका छन् । कोरोनावाट बच्न अपनाउनुपर्ने मापदण्डका बारेमा पनि बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान जारी राखेका छन् । पछिल्लो समय विश्वभरका मुलुकहरु कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रेष्टुरेन्ट, पसल र सिनेमाजस्ता व्यावसायिक क्षेत्र खोल्न संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा वैज्ञानिकहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
लामो समय सम्म बन्द गर्नुपर्दा ब्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको कुरा उठिरहेको छ । उनीहरुले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर बैज्ञानिकको यस्तो चे,ता,व,नीले भि,ड,भा,ड हुने यस्ता ब्यवसाय संचालन गर्दा जोखिम हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म डब्ल्यूएचओले बारम्बार हात, धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र कम्तीमा एक मिटरको भौतिक दुरी कायम राख्ने दिशानिर्देश जारी गर्दै आएको छ । तर, यो पर्याप्त नहुने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।